IINGCAMANGO EZINGAMA-45 EZIPHAMBILI ZOMNQAMLEZO WE-CROSS STITCH TATTOO - [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
Iingcamango eziphezulu ze-40 + ze-Cross Stitch Tattoo - [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Uhlobo olutsha kwihlabathi le tattoo luvelisa uyilo olwenza umphumo wokuhonjiswa komnqamlezo, ukubonisa ukuba ukukhuthazwa kweetattoos ezikumgangatho ophezulu ngokwenene kunokuvela naphina.
Ukuthunga umnqamlezo yeyona ndlela indala yokuhombisa kunye nobungqina bokusetyenziswa kwayo kufunyenwe kwiinkcubeko kwihlabathi liphela.
Iyaziwa njengesixhobo sokubala esenziwe ngemisonto ngenxa yendlela umthungi alinganisa ngayo isithuba ukwenzela ukuba isitokhwe esimile ngohlobo lwe-X silingane ngobukhulu.
Esi sitayile sokuhombisa sifumana igama lazo kwezi ziqu zinemilo ye-X kwaye le ndlela yokwenza indlela inika uyilo lokumisa umnqamlezo ngenkangeleko yabo eyahlukileyo yepikseli.
Ekusetyenzisweni kwasekuqaleni ukuhombisa izinto zasekhaya ezinje ngetafile kunye namakhethini, namhlanje kuyinto eqhelekileyo ukubona izambatho zomnqamlezo ezisetyenziselwa ukuvelisa izilenge zodonga ezibonisa iindidi ezahlukeneyo zoyilo, kubandakanya ubungqina bobona bukhulu babantu be-geeky obsessions.
Iitattoos ezisetyenzisiweyo zisebenzisa le ndlela zibonisa imixholo eyahlukeneyo yesifundo egxininisa ipatheni yomnqamlezo ehlanganisa uyilo olwahlukileyo. Ezi tatto ziyimizekelo emihle yendlela ebonisa ukuba kunokwenzeka ntoni xa kusiza ukuwela uyilo lwe tattoo oluphefumlelweyo.
1. Isitayile soMnqamlezo wezilwanyana
Umthombo: @lamoglietatuata nge-Instagram
Umthombo: @evakrbdk (igcisa) nge-Instagram
Umthombo: @chikiniple nge-Instagram
Umthombo: @ chlo.vorster nge-Instagram
Umthombo: @ floweroflife.piercingandtattoo nge-Instagram
Umthombo: @ j.skinz78 nge-Instagram
Izilwanyana bezingumxholo woyilo lwe tattoo kangangeenkulungwane: ezinye zeetattoos zokuqala ezakhe zabhalwa zineempawu zezilwanyana kwaye zabuyela kumawaka eminyaka eyadlulayo.
Abanye abantu bakhetha ukufumana izilwanyana ezinempawu ezithandekayo ezi-inki kwimizimba yabo ngelixa abanye bekhetha ukufumana umfanekiso wezilwanyana zasekhaya abazithandayo.
Iimpawu zokunqamla umnqamlezo kule ngqokelela yimizekelo emihle ebonisa ukuba kuyilo lwezilwanyana olunokuphumelela njani xa usetyenziswa usebenzisa le ndlela inomdla yokulinganisa.
Nokuba kunombala okanye mnyama okanye ngwevu, kwabanye abantu i-tattoo yesilwanyana esinqamlezileyo zizinto ezifanelekileyo zokuncedisa imeko yabo yesitayile kunye nobuntu obahlukileyo.
2. Ubugcisa obuMnyama kunye obuGreyini boMnqamlezo
Umthombo: @babyfaceoneill nge-Instagram
Xa uninzi lwabantu lucinga ngokubethelelwa emnqamlezweni, imifanekiso yokuxhonywa eludongeni enemibala eqaqambileyo ihlala iza engqondweni. Ngelixa umbala omnyama nengwevu kunganxulunyaniswa ngokwesiqhelo nale fomu yobugcisa inemibala, le tattoo yomnqamlezo ibonisa le ndlela inomboniso wesibheno kwindalo iphela eboniswe kwilaphu lomntu.
Ukuzinikezela okuthandekayo kumama onxibayo, esi siqwenga siphinda sisebenzise ipateni yokunqamlezo eqhelekileyo ebandakanya ispool somsonto kunye nesipper somthungo ukugqibezela uyilo. Zimbalwa iindlela zobuchule ezinokuthi zifanise ubuhle obungaphantsi komgangatho owenziwe kuyilo olumnyama nolungwevu lwe tattoo kwaye esi siqwenga siqinisekisa impumelelo yendlela yokuyilwa komvambo wokuthungwa komnqamlezo.
3. Ingcamango yeKhathuni enqamlezileyo
Umthombo: @ mariette.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @ lin.bongarts nge-Instagram
Umthombo: @melatneoncrab nge-Instagram
Umthombo: @seanjogrady nge-Instagram
Umthombo: @ nattiebrown009 nge-Instagram
Umthombo: @nerdsandneedlestattoostudio nge-Instagram
Umthombo: @alberto_rojo_tecolotl nge-Instagram
Abalinganiswa kunye namabali abantu abakhula nawo benza ifuthe elinamandla kubomi babo. Uyilo lwekhathuni lwekhathuni yindlela entle yokukhumbula ukubaluleka kwala mabali. Iimpawu zokunqamla umnqamlezo kule ngqokelela ziphinda zisebenzise inani labalinganiswa bekhathuni kubandakanya inamba esebenzisa indlela ethe kratya kodwa ikwazile ukusebenzisa ipatheni yomnqamlezo ukugqibezela uyilo.
Abanye oonobumba abakolu qokelelo lweetattoo zetattoo bakhutshiwe Ilizwe lemidlalo yevidiyo , Ehambelana ngokugqibeleleyo nobuhle obenziwe ngokusebenzisa ipatheni yomnqamlezo. Iziphumo ezingaguquguqukiyo nezicokisekileyo eziveliswa yile ndlela yokuthunga umnqamlezo zibonisa ubugcisa be-pixel obusetyenziselwa ukwenza imidlalo ye-8-bit yevidiyo kwaye kudala umdla onomdla wemifanekiso ye-elektroniki esetyenziswa ngentambo kunye nenaliti kwilaphu.
4. Uhlobo olutsha lweTattoo yeentyatyambo
Umthombo: @anthonyniceleytattoos nge-Instagram
Umthombo: @becky_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @blackdahliaink nge-Instagram
Umthombo: @disruptiveinktattoos nge-Instagram
Umthombo: @haideguadalop nge-Instagram
Umthombo: @juanmorenokrk nge-Instagram
Umthombo: @kamalatattoos nge-Instagram
Umthombo: @micahmccoubrey nge-Instagram
Umthombo: @riverrattracy nge-Instagram
Umthombo: @stacielanae nge-Instagram
Umthombo: @tattoosbyaj nge-Instagram
Umthombo: @tylerrowdentattoo nge-Instagram
Ngelixa abalinganiswa bomdlalo wevidiyo banokuba zizincedisi ezigqibeleleyo kwabanye abantu, kwabanye umbono osisithethe osetyenzisiweyo kuyilo ulunge ngakumbi kwi-tattoo yabo yomnqamlezo. Ngombulelo kwaba bantu, iipateni zeentyatyambo ziye zaba yimixholo exhaphakileyo kuyilo lokuhonjiswa kwemilobo kangangeenkulungwane kwaye kukho amawakawaka eepateni okhuthazayo.
Iimpawu zomnqamlezo weentyatyambo ezikule ngqokelela zikwabonisa ukungahambelani kwendlela yoyilo lwe tattoo: ezinye zeetattoo zizoba ngokuthe ngqo kwipatheni yomnqamlezo weklasikhi kwaye ziya kujonga ikhaya lixhonywe eludongeni kwigumbi lokuhlala likamakhulu.
Olunye uluvo lwe tattoo lwentyatyambo luthatha indlela yokuyila ngakumbi, ukuvelisa uyilo lwe-hybridi olubandakanya ukuthungwa komnqamlezo kunye nolwandiso oluqinileyo oluqhelekileyo kwezinye iindlela zetattoo; Nangona kunjalo zonke ezi tattoos zomnqamlezo zidityanisiwe yile patheni ekhethekileyo yokuhombisa.
5. Kwintliziyo yeengcamango zeTattoo ezimangalisayo
Umthombo: @ciotka_zu_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @dawn_radford nge-Instagram
Iintliziyo zizinto eziqhelekileyo zoyilo kwiitattoo amashumi eminyaka, ke akufuneki ukuba kumangalise ukuba abantu bakhethe indlela yokunqamleza ii-tattoos zentliziyo yabo.
Kwabanye abantu intliziyo enqamlezileyo inokubonisa uthando lwabo lokuthunga kunye nokunitha iinaliti, ngelixa abanye le tattoos yokuhombisa ingabonisa umntu omthandayo owayenomdla wokubethelelwa emnqamlezweni.
Nokuba yeyiphi inkuthazo kunye nokubaluleka kwesiqwengana, ezi tattoos zomnqamlezo zibonisa ukuba le ndlela inokusetyenziswa ngempumelelo njani kwiitattoos zentliziyo.
6. Ubukrelekrele bomzimba kunye nobugcisa
Umthombo: @sonia_tessari nge-Instagram
Umthombo: @devilswrkshop nge-Instagram
Enye into eqhelekileyo yoyilo kwiitattoo, Ukhakhayi lukhetho olunomdla kwi-tattoo yomnqamlezo. Ukhakhayi ziimpawu ezinamandla zokufa kunye nokufa, iikhonsepthi ezimbini ezibonakala ngathi zikude kulo msebenzi wobugcisa uziphumzisayo, nangona kunjalo, lo ngumahluko kuphela owenza ukuba ipatheni yomnqamlezo ityheke tattoo ibenomdla.
Ngokuthatha eli xesha lidlulileyo-elihlala linxulunyaniswa nogogo wakho omncinci- kwaye ulisebenzise ukufaka uyilo olunxulunyaniswa nezaphuli-mthetho kunye nabavukeli isigqebelo sobukrelekrele esiyilelayo siyila ezo zinto zoyilo.
Umthombo: @alyxkopietattoos nge-Instagram
Umthombo: @ danadane77 nge-Instagram
Umthombo: @djrissaj nge-Instagram
Umthombo: @evakrbdk nge-Instagram
Izicatshulwa ezikhuthazayo zihlala zinceda abantu ukuba badlule kumaxesha anzima ebomini babo; amanye amabinzana anokuzisa uncumo ebusweni bakho nangaliphi na ixesha losuku. Ngenxa yezi zizathu nangaphezulu, uninzi lwabantu lukhetha ukufumana uyilo olubandakanya iskripthi ukusika ukungaqondakali kunye nokwenza iitatoo ezinomdla.
Iziphumo ezenziweyo xa kusetyenziswa isicatshulwa esikhuthazayo usebenzisa ipatheni yokunqamla umnqamlezo inokubonelela umntu ngesikhumbuzo esisigxina sokuqhubeka nokuhamba kwaye angaze anikezele. Kwelinye icala, xa kusetyenziswa ibinzana elihlekisayo nelinyanyekayo kusetyenziswa umnqamlezo wokubopha umvambo we tattoo uqinisekile ukuvelisa uncumo kunye nokuhleka kwiminyaka ezayo. Ezi tattoos zomsebenzi weskripthi luthambiso nje lwento enokwenzeka ngengqondo enobukrelekrele kunye nale ndlela ithandwayo kuyilo lwe tattoo.
8. Indlela eNtsha yobuhlanga
Umthombo: @idamariatattoo nge-Instagram
Umthombo: @zombiebellabug nge-Instagram
Umthombo: @lalavtattoo nge-Instagram
Uyilo lwe tattoo yesizwe ibikhona kangangesithuba seminyaka engamawaka kodwa kwihlabathi lokwenza umvambo okwangoku kuthathwa njengesizwe kuyaqhubeka ukuvela kwaye akukho nto inokubonisa ukuba olu luvo luhamba ngcono kunala ma tattoos omnqamlezo wesizwe.
Ukuzoba ukhuthazo oluvela kwinani lezithethe zenkcubeko, ezi tattoos zomnqamlezo zinqamle ngokugqibeleleyo ubuhle besizwe ngokusetyenziswa kweendlela zokuhombisa ze tattoo.
Ngombala okanye mnyama namnyama, ngokungacacanga okanye ngokulula, ezi tattoos zomnqamlezo wesizwe zibonisa amandla angapheliyo okuyila umvambo.
Iitattoos zizixhobo ezinamandla zokuzibonakalisa kwaye kubantu abathile ukuba banoluhlobo oluthile lwe tattoo kuphela kwendlela. Into entsha enxulumene nomnqamlezo weetattoos emhlabeni wobugcisa bomzimba kuthetha ukuba le ndlela ilunge ngakumbi ekwenzeni iitatoo ezizodwa ezingazange zibonwe ngaphambili. Iimpawu zokunqamla umnqamlezo kule ngqokelela zibonisa ithuba loyilo olwahlukileyo olunikezelwa yile ndlela: ukusuka kwiminenga emikhulu ukuya kwiimoto ezincinci, naliphi na inani lezifundo linokusetyenziswa kwiitattoo zokuhombisa.
Yintoni tattoo yomnqamlezo?
Iimpawu zomnqamlezo ezinqamlezileyo zisebenzisa i-inki ukuphinda zisebenzise isiphumo sale ndlela yakudala yokuhombisa kwaye baya besanda ngakumbi. Njengokuba ubuchwephesha bokwenyani bomnqamlezo busebenzisa umgama olinganiswe ngokulinganayo ukufaka intambo, le ndlela yeetattoos isebenzisa ipateni efana negridi yokuqinisekisa ukuba i-inki ibekwa ngokungaguquguqukiyo.
Ngaphandle kokuqelelana, uphawu oluchazayo lwale ndlela yimilo yokuthunga kwaye ngokulingisa ukuzithungisa umculi we tattoo uyakwazi ukuvelisa ngokuchanekileyo isiphumo sokuyilwa komnqamlezo kulusu lomntu onxibileyo. Amakhulu amancinci amilise okwe-X asetyenziselwa ukuvelisa uyilo kwaye umzobi we tattoo usebenzisa le ndlela inye xa efaka i-inki.
Xa ugqityiwe, ii-tattoos zokunqamla umnqamlezo ziyabulela kumbulelo ngobunono kunye nokuchaneka kwendalo yoyilo kunye nenkqubo yokwenza isicelo.
Uyintoni umahluko phakathi komnqamlezo we tattoo kunye ne tattoo eyimfakamfele?
Ngokobuchwephesha, umnqamlezo we-stich tattoo ngumzobo we-embroidery njenge-cross stitching luhlobo lwe-embroidery-intambo, kodwa xa abantu bebhekisa kwi-embroidery tattoo bahlala becinga ngesiqwenga esisebenzisa isitayile esahlukileyo.
Umsebenzi wobugcisa kunye nokuthungwa kwe-satin zezinye iindlela zokuhombisa eziye zaphefumlela uyilo lwe tattoo. Ngelixa isinqamlezo somnqamlezo sisebenzisa ipateni emiswe okwe-X. Umsebenzi weCrewel ubhekisa kwinkqubo yokuhombisa usebenzisa intambo yoboya enkulu eyahlukileyo kwezinye.
Imbali ende yokuhonjiswa kuthetha ukuba kukho ingqokelela engapheliyo yoyilo lokufumana ukhuthazo kwi tattoo yakho elandelayo.
Kwakhona, ukuba uyayithanda imbono kodwa unqwenela ukuyivavanya ngaphambi kokuzibophelela kwi-inki esisigxina, ubukhulu be tattoo bunokuphononongwa. I tattoo yethutyana inokuba luncedo ukuba ujonge ukufumana i-inki kwiindawo ezibonakalayo, okanye ukuba ukhetho lwakho loyilo ludinga uvavanyo olucokisekileyo.
Zithetha ukuthini ii-tattoos zomnqamlezo?
Indlela yokuwela umnqamlezo kuyilo lwetattoo ilungile ngenxa yoyilo olwahlukeneyo kunye nemiboniso enokuveliswa kusetyenziswa obu buchule: yonke into ukusuka kwimifanekiso yezilwanyana zasekhaya ukuya kwiindawo ezikwiSandi soMculo zinokwenziwa kwi-tattoo stitch yomnqamlezo.
unxibe ntoni kwiqela labasetyhini elingu-90
Nangona kunjalo, ngeendlela ezininzi zomnqamlezo weeTattoos ubuchwephesha bubaluleke nje ngesihloko. Abantu abane-tattoo stitch yomnqamlezo bahlala benonxibelelwano kunye nale ndlela yokuhombisa; mhlawumbi umama wabo wabafundisa indlela yokuwela umthungo njengomntwana, okanye mhlawumbi umakhulu wabo wayedla ngokuhombisa amalaphu etafile yakhe ngeepateni zokunqamla umnqamlezo.
Ngenxa yezi zizathu uninzi lwabantu lukhetha ii-tattoos zomnqamlezo khumbula usapho kunye nabathandekayo ababumba ubomi babo ngeendlela ezingezizo ezomfanekiso okanye ividiyo. Inkangeleko ecacileyo yale ndlela iqinisekisa ukuba wonke umntu olibonayo eli qhekeza uyakuqonda ukubaluleka kwale ndlela yokuhombisa kulowo uyinxibileyo.
Ngaba uzonwabele ezi tattoos ezizodwa, ezintle ezikumgangatho ophezulu? Cofa kwiikhonkco ezingezantsi zegalari ukuze zikunike ugqozi lwe tattoo yakho elandelayo:
Iingcamango zeTattoo ze-Embroidery
Uyilo loMama weSiko
Uyilo olwahlukileyo lweTattoo yeZandla
Iingcamango eziphezulu ze-103 zeTattoo
iindawo ezintle zokufumana iitattoos
Iingelosi zamaphiko kunye ne-initials tattoo
zonke iimpahla zokunxiba ezimnyama
Iitawoti zemikhono yesiqingatha samadoda engalo yangaphambili
Ukuthandaza izandla nge-rosary tattoo